Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » Karim Benzema oo weerar ku qaaday saaxiibkiis Cristiano Ronaldo – maxaase ugu wacan qaab ciyaareedkooda liita?Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
Karim Benzema oo weerar ku qaaday saaxiibkiis Cristiano Ronaldo – maxaase ugu wacan qaab ciyaareedkooda liita?
Tababaraha xulka qaranka Faransiiska Didier Deschamps ayaa markale ka tegay weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema.
Karim Benzema iyo saaxiibkiisa Los Blancos Cristiano Ronaldo ayaan qaab ciyaareed wanaagsan ku jirin marka laga hadlayo ciyaaraha maxalliga ah ee horyaalka La Liga, iyadoo weeraryahanka reer France iyo kabtanka xulka Portugal ay ku dhibtoonayaan inay goolal dhaliyaan.
Balse Karim Benzema ayaa weerar ku qaaday Cristiano Ronaldo wuxuuna daaha ka qaaday in xiddigii hore ee kooxda Manchester United uu isagu isla jecel yahay inuu gool walba dhaliyo, sidaas darteed uusan kubadda u baasin.
Isagoo la hadlayey Canal+ wuxuu yiri: “Ronaldo waa iga anaanisan yahay aniga, laakiin taasi waa wax iska caadi ah. Anigu waan jeclahay inaan isaga ka garab ciyaaro. Sidoo kale anaaninimada Ronaldo ugu dambeyn waa mid u wanaagsan kooxda maadaama uu goola badan dhaliyo”.
Qaab ciyaareedka xun ee uu ku jiro xiddigii hore ee kooxda Lyon ayaa keenay inay xitaa kasoo horjeestaan taageereyaasha kooxdiisu kuwaasoo dhowr jeer ku fooriyey.